किन सुस्त भयो पर्वतमा पुनर्निर्माणको गति ? यस्तो छ कारण ! - News site from Nepal
किन सुस्त भयो पर्वतमा पुनर्निर्माणको गति ? यस्तो छ कारण !
सानोतिनो राहतमा खाद्यान्न, आश्वासन र प्राविधिकका सल्लाह सुन्दासुन्दै हैरान परेका बिहादी–३ रानीपानीकी गंगा पराजुली आफैंले घर निर्माण सके । तर, प्राविधिक स्टिमेट नमिलेको भन्दै पाउनुपर्ने अनुदान रकम अझै पाएका छैनन् । फलेवास–३ का टीकाराम तिवारीले पनि भत्किएको घर बनाएर सकेको दुई वर्ष पुग्यो । तर, अहिलेसम्म सबै किस्ता रकम पाउनै सकेका छैनन् ।‘मैले घर सक्दा १० लाखभन्दा बढी खर्च भयो,’ फलेवासका टीकारामले भने, ‘प्राविधिकले यो पुगेन र त्यो पुगेन भन्दै पुरै घर भत्काउने भन्छ । अब घर भत्काउनुभन्दा राहतै नलिन बेस भएन ?’ २०७४ कात्तिकमा सुरु गरेको रानीपानीकी विष्णु श्रेष्ठको घरको जग, पिल्लर र बिम बाँधेर छोडेपछि अहिलेसम्म काम अघि बढ्न सकेको छैन ।